ကိုညို (အော်စလို)| February 16, 2013 | Hits:17,696
12 | | မီးဒုတ်တွေကိုင်စွဲပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လမ်းလျှောက် ချီတက်ကြ (ဓာတ်ပုံ – ISFiT Facebook)
5 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website theingi tun February 16, 2013 - 4:35 pm	ဂုဏ်ယူပါတယ်ကိုမင်းကိုနိုင်။မြန်မာကျောင်းသားထုတစ်ရပ်လုံးကိုယ်စားဒီဆုကိုရယူပေးတယ်လို့ခံစားမိပါတယ်။၈၈အရေးအခင်းမှာကြွေလွင့်သွားသောပန်းကလေးများကိုယ်စားရယူတယ်လို့လဲမှတ်ပိုက်ပါတယ်။
Reply	မြန်မာပြည်သား February 16, 2013 - 6:01 pm	congratulation Ko Min Ko Naing
Reply	Sunshine February 18, 2013 - 2:11 pm	Min Ko Naing for President is the right idea. Without the help from cronies, he can serve us well. He is the real deal. We love himalot.
Reply	lily February 18, 2013 - 6:09 pm	I’m proud of you , Ko Min Ko Naing.
Reply	Thida Moe February 23, 2013 - 7:13 pm	I am Proud of You for Myanmar .